China JY-2123SSN ​​Defoamer Agriculture Industry factory and manufacturers | Juyou
JY-2120SSN mejupụtara polyether na surfactant, wdg.
Na-akwụsi ike na oke okpomọkụ (90 ℃) yana acid siri ike (pH 1.0-2.0).
Transparen na -enweghị agbat mmiri mmiri, na -enweghị ihe ọ bụla n'ibu.
Akwụkwọ ngosi pH sara mbara
JY-2120SSN Antifoam nwere ihe dị iche iche. Eleghi anya ngwaahịa a ga -agbatị ma ọ bụ enwere nkwụnye ego mgbe etinyere ya ogologo oge na ọ bụ ihe nkịtị. A na -atụ aro ka onye ahịa na -akpalite ya tupu ọ na -eji ya na ọ naghị emetụta arụmọrụ ngwaahịa (ọsọ mkpali dị n'etiti 30rpm ruo 60rpm).
Enweghị ike iji mmiri gwakọta ngwaahịa a. Enwere ike ịgwakọta ya na ihe mgbaze organic. Ọ bụrụ na ejiri mmiri gwakọta ya, ngwaahịa a nwere ike iyi nke edoziri, n'ikpeazụ na -ebute mmụba ọnụ ahịa, ụlọ ọrụ anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla.
A na -atụ aro na agbakwunyere ngwaahịa ahụ ebe defoamer dị mfe ịgbasa ngwa ngwa. Usoro ngwa akọwapụtara dị ka ndị a:
Usoro phosphoric acid nke mmiri mmiri: Tinye ngwaahịa ahụ na usoro na-akpali akpali, ma ọ bụ tinye ngwaahịa ahụ tupu afụ. Usoro onunu a tụrụ aro bụ 0.8 ruo 1.2 ‰ maka ọdịnaya P2O5 nke okwute phosphate ala.
Ngwaahịa dị na akpa rọba 20kg; nha nwere ike ahaziri dị ka mkpa pụrụ iche si dị.
Echekwara dị ka kemịkal nkịtị, na -anọghị na isi okpomọkụ na ìhè anwụ.
Ndụ shelf bụ ọnwa 12 site na mgbe emepụtara ya.
Nke gara aga: JY-1027 Solidact surfactant silicone maka agro-kemịkal
Osote: JY-2800SN DefoamerCement Industry